Ny tolona Sabotsy 6 jona 2009 indray no nahazo olona be indrindra | Hevitra MPANOHARIANA
Tsaratsara kokoa raha mba nataonao sary ilay resaka fandrefesana etsy ambony.
Ny sary iray hono tsaratsara kokoa noho ny teny arivo :).
Misaotra ra-Jentl a!
Nampidirin'i Rojo @ 13:53, 2009-06-08 [Valio]
zany mihitsy. atao impression ecran ry jentilisa a :)
Nampidirin'i jean-claude @ 13:54, 2009-06-08 [Valio]
Mankasitraka hatrany ny fahafoizan-tena @ famakafakana ny zavamisy sy ny famoahanao ny fomba fijery avy aminao...
Nampidirin'i Haja - Canada @ 17:22, 2009-06-08 [Valio]
Mankasitraka mihitsy izahay aty ivelany @ filazan'i jentilisa ny rehetra. Misaotra lesy a
Nampidirin'i Veloo @ 04:08, 2009-06-10 [Valio]